Siidaan Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu eebbaaf qophaa'e - BBC News Afaan Oromoo
Siidaan Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa kun galma aadaa Salaalee waliin waluma faana akka hojjetame ibsanii, yeroo kana xumuramee bakka dhaabbachuu qabu dhaabbatee guyyaa eebbaa eeggachaa jira jedhu.
Ijaarsi siidaa kun dura ijaaramuu jalqabee akka ture yaadatanii, amma galma magaalaa Salaalee kana waliin bakka tokkotti akka qophaa'u taasifameera.
Siidaan kun seeraan caali-baasiin bahee dorgommii qaama mo'atetu ijaare jedhu Aadde Almaaz.
Akka aanga'aan kun jedhanitti eebbi isaa A L I gaafa Caamsaa 18 yommuu ta'u, ergaan Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu qabsaa'aaf ture siidaa kanarratti barreeffameera.
Birgaadeer Jeneraal Taaddasaan barumsaaf bakka guddaa akka kennaniifi barate malee dhaloonni akka eenyummaa isaa baruu hin dandeenye akka dhaloonni irraa baratu barreeffamni ergaa kana fakkaatu irratti barraa'ee ibsaniiru.
"Namni tokko kutaa afurii ol darbee barachuu hin qabu jedhu ture. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa garuu kana mormaafi irratti qabsaa'aa turuun isaa ni yaadatama," kan jedhan Aadde Almaaz kan gootichi lubbuu isaanii dhabaniif kanumaaf ture jedhu.
Akka inni uummata isaaf qabsaa'aa ture kan agarsiisuufi yeroo mana hidhaa turetti cancalaan akka hidhame kan agarsiisan bifa ergaa dabarsaniin hojjetamaniirus jedhu.
Kanaan dura siidaa hawaasni goota jedhun qarshiin walitit qabame achi buuteen isaa dhibe komii guddaa kaasaa turun isaa ni yaadatama.
Haayilasillaasee 1ffaa: Gamtaan Afrikaa maaliif siidaa dhaabeef?